पत्रिका अपमानित कि बाबुराम ? | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » पत्रिका अपमानित कि बाबुराम ?
पत्रिका अपमानित कि बाबुराम ?
‘भारतको पंजाव जलिरहेको थियो । छुट्टै देश खालिस्तान बनाउन जर्नैलसिंह भिन्डरावालले मचाएको आतंकले सिंगो भारतलाई प्रभावित पारेको थियो । यस्तो परिस्थितिमा तात्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधीले मन्त्रिपरिषदमा पंजाव भ्रमण गर्न राखेको प्रस्तावले सवैलाई गम्भिर बनाएको थियो । धेरैले अहिलेको अवस्थामा पंजाव नजान सल्लाह दिएका थिए । तर गाँधीको दृढ इच्छाशक्तिको अगाडि कसैको केही चलेन । उनले भने– “म शदगतिको प्राप्त भयो भने मेरो लासलाई दिल्ली नल्याउनु त्यही झेलम नदीको किनारामा दाहसंस्कार गरिदिनु ।” उनी अमृतसर पुगीन । विखण्डणकारी आन्दोलनलाई अपरेशन व्लूस्टार संचालन गरेर अन्त्य पनि गरिन । पछि उहाँ आफ्नै शिख गार्डद्वारा मारिइन । तर समृद्ध पंजावलाई मुलुकवाट अलग्गिनवाट जोगाइन ।’
विगत डेढ महिनादेखि मधेश जलिरहेको छ । आक्रान्त छ । मंत्रीको त के मधेशी सांसदसम्मले मधेशप्रवेश गर्न हिम्मत जुटाउन सकिरहेका छैनन् । संविधानमा हस्ताक्षर गरेका कुनै पनि पहाडी नेताकोलागि मधेश भ्रमण अहिले दुर्लभ भएको छ । पहाडी र मधेशी वीचको ध्रवीकरणले पराकाष्ठा नाँघ्दै छ, जसमा पार्टीहरुको दीपावली मनाउने निर्णयले आगोमा घिउ थपेको छ । यस्तो विषम र प्रतिकूल परिस्थितिमा डा. बाबुराम भट्टराईले जनकपुरको भ्रमण गर्न हिम्मत जुटाउन सक्नु वेमिसाल हो । यो धेरै ठूलो साहसी कार्य हो । उदाहरणीय हो । ऐतिहासिक दायित्वबोधको क्षणलाई आत्मसात गर्नु हो । यसलाई जति प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ । तर मुलुकको राष्ट्रियता, सदभाव र सहिष्णुताको लागि जनकपुर पुगेका बाबुराम जनताका लागि आँखाको नानी बनेपनि केही कुलाङ्गारहरुको लागि कसिंगर बनेका छन् । एकातिर मधेश आन्दोलनलाई सम्वोधन पनि नगर्ने अर्कोतर्फ कसैले मधेशी जनताको घाउमा मलहमपट्टी लगाउन जादा त्यसलाई देखिनसक्ने प्रवृतिले देशमा असहज परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ । यहाँसम्मकी राष्ट्रिय स्तरका एकआध संचारमाध्यमले बाबुरामको जनकपुर भ्रमणको जुन संदेश प्रवाहित गरेको छ त्यो राष्ट्रिय स्वर्थ अनुकूल छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि ती मिडियामाथि तेस्र्याउने वेला हो यो । मूलतः यी तिनै मिडिया हुन जसले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको गीत गाउनमा आफ्ना पर्याप्त पृष्ट खर्चिदै आएका छन् ।
मधेश र पहाडको वीच दूरी बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न बाबुरामले जुन प्रयास गर्नु भएको छ त्यो प्रशंसनीय छ । यसलाई कुनै पनि किसिमले नजायज ठहराउने ठाँउ छैन । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा सम्पन्न सफल जनकपुर भ्रमणलाई असफताको विल्ला भिडाउने दुष्प्रयास मात्र ठहर्दछ । किनकि जनकपुरमा अहिलेसम्म तीनजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । डेढ महिनादेखि पूर्ण रुपमा ठप्प छ जनकपुर । चारैतर्फ आक्रोशपूर्ण माहौल छ । दिनहू नारा, जुलूस र आम सभाले वातावरणलाई तताएको छ । यस्तोवेला त्यहाँ थोडवहुत बचेखुचेका पहाडी समुदाय कसैगरि आफ्नो जीवन धाइरहेका छन् । नेताहरुप्रति मात्र होइन सिंगो पहाडी समुदायप्रति नै मधेशी समाजको अविश्वासको भावनाले जोड पकडेको छ । जय मधेश वाहेक जय नेपाल बोल्ने हिम्मत कसैमा छैन । प्रहरी प्रशासन किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा छन् । यस्तो विषम र प्रतिकूल परिस्थितिको वेला पहाडी र मधेशी वीच रहेको सदभाव, सहिष्णुता र भातृत्वलाई मंचवाट परिभाषित गर्नु साहृै कठिन कार्य हो । पार्टी छोड्दै जसरी बाबुरामले भत्केको घरमा फर्किन्न भन्नु भएको छ ठीक त्यसरी नै विखण्डनको नाराले जोड पकडन् लागेको वेला मधेश आन्दोलनले अर्को दिशा नसमातोस् भन्ने चिन्ता र चेतका साथ उहाँ मधेश पुगेको हो । इन्दिरा गाँधीको पंजाव पुगेको अवस्थाको स्मरण पक्कै बाबुरामलाई भएको हुनुपर्छ । त्यतिवेला उनि भरखरै ज.ेएन.यू वाट अध्ययन सक्नु भएको थियो ।
यसप्रकारको कार्यको थालनी कुनै पहाडीमूलका सत्ताधारी नेतावाट हुनुपर्ने थियो तर कसैले हिम्मतसम्म गर्न सकेनन् । मंत्री विमलेन्द निधिले आफ्नो गृह शहर जनकपुर टेकेको कैयौ महिना भैसकेको छ । उहाँको विरुद्धमा लागेको भदद नारालाई शब्दमा व्यक्त गर्न म असमर्थ छु । यो कहाली लाग्दो अवस्थामा बाबुराम जस्तो व्यक्तिको उपस्थितिले सिर्जना गरेको सकारात्मक पक्ष नै अहिलेको प्रमुख समाचार बन्नु पर्ने हो । त्यसकारण मिडियाले राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ । व्यक्तिगत रिसइवि र पार्टीगत स्वार्थलाई अहिलेको अवस्थामा गौन बनाउनु पर्छ । एकातिर भारतले नाकावन्दिी गरेको कुरालई राष्ट्रिय स्वार्थसंग जोड्ने अर्कोतर्फ मधेश आन्दोलनलाई न्यूनिकरण गरेर आफ्नै मुलुकवासीसंगै भेदभावको नीति अंगाल्ने हो भने विखण्डनको नाराले प्रश्रय पाउछ । त्यसले आफ्नो भूमि तयार पार्छ । मुलुक अशान्त हुन्छ । पाकिस्तानको विखण्डन र वांग्लादेशको निर्माणमा यस्तै प्रवृतिका संचारमाध्यमहरुले अहम भूमिका खेलेका थिए ।
काठमाण्डौवाट प्रकाशित हिन्दुवादी भन्ने चिनिएका एक राष्ट्रिय दैनिकले बाबुरामको भ्रमण असफल भनेर ‘बाबुराम मधेशमा अपमानित’ शिर्षकमा प्रमुख समाचार बनाएको छ । हुदै नभएको कुरालाई अतिरंजित गरेर समाचार प्रकाशित गरेर जुन प्रचार गर्न खोजेको देखिन्छ त्यसले पहाडी र मधेशी वीचको एकतालाई सुदृढ बनाउने मनसायवाट पुगेका बाबुरामसंग व्यक्तिगत रिसइवि लिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि जहाँ पुग्नै गाहे भैरहेको अवस्थामा त्यहाँ पुगेर बाबुरामले वोलेको समयलाई समेत छोट्याएर लेख्नु, रामचन्द्र झासंग सामान्य भानाभानको अवस्थालाई हातपातसम्मको स्तरसम्म पु¥यउनु तथा मूल समाचारलाई न्यूनिकारण गरेर तपसीलको विषयलाई प्रमुखता दिनु पत्रकारिताको मूल मर्मलाइ आत्मसात गरेको देखिन्न । त्यसमा पनि समाचारलाई प्रथम पृष्टमा प्रकाशन गर्नु पूर्वाग्रही अवस्थालाई जनाउछ । यो पक्कैपनि दुःखदायी विषय हो । यसलेगर्दा त्यो पत्रिकाले आप्का हाउसमा कमाएको साख ओरालो लागेको छ । यसतर्फ ध्यान दिनु बढी बुद्धिमानी होला ।
यो भन्दा पहिले पनि माओवादीसंगै मधेशी मोर्चाले खुलामंचमा गरेको आम सभाको अतिरंजित तस्वीर प्रकाशित गरेपछि मैले पत्रिकाका एक जिम्मेवार व्यक्ति चुडामणि भट्टराईसंग गुनासो पोखेको थिए जसलाई उनले सकारात्मक रुपमा लिदै चिया खान बोलाउनु भएको थियो । तर फेरि आज तिनैप्रकारको गल्तिको पुनरावृति भएको छ । पत्रकारलाई जे मनमा लाग्छ लेख्ने तर त्यसलाई सभ्यभाषामा जवाफ पनि दिनुलाई धम्की भनेर समाचार प्रकाशित गरिन्छ भने पक्कैपनि त्यसले पूवाग्रही भएको आभास दिन्छ । यो पत्रकारिताको आचार संहिताको विपरित कुरा हो । एकातिर आन्दोलनको क्रममा शहीद भएका जकपुरका सपूतहरुको एउटा फोटोसम्म प्रकाशित नगर्ने पत्रिकाले आज मधेश आफै जलिरहेको अवस्थामा आगो दन्किदै गरेको दृश्य सम्प्रेशन गर्दै समाचारलाई तोडमडोड गरेर प्रकाशन गर्नु पक्कै पनि बस्तुगत यथार्थवाट पर जान खोजेको देखिन्छ । त्यसैले ठूलो रिस्क लिएर दुई समुदाय बीचको सदभाव र सहिष्णुतालाई सुमधुर बनाउन जनकपुर पुगेका बाबुरामको यथोचित समाचार सम्प्रेशन नगर्नु पत्रिकाको लागि स्वभाविक हो । बालिका सम्वाददातालागि अझ वढी कष्टकर सावित भएको हुनु पर्छ । भलेही उसको वाइलाइन समाचार किन न होस् । नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मनन गर्ने हो भने अहिलेको नेपाली पत्रकारिता प्रचण्डको आवेगात्मक भाषणलाई ठाउँ दिने स्थल होइन । ओलीको उखान टुक्का सम्प्रेशन गर्ने माध्यम पनि होईन । ऐतिहासिक दस्तावेज निर्माण गर्ने वेला हो यो । हजारौ हजार जनताको उपस्थितिमा बाबुरामको जनकपुर भ्रमण तथा अजश्वी मन्तव्यले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । तसर्थ सम्वन्धित पक्षलाई चेतना भया !